လက္ကား PET Tasting Cup ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ Copak
Shanghai COPAK Industry Co, LTD ကို ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးရှန်ဟိုင်းတွင်အရောင်းရုံးနှင့် Zhejiang တွင်စက်ရုံရှိသည်။ COPAK သည်ပလတ်စတစ်အိတ်များနှင့်အစားအစာထုပ်ပိုးသည့်ရုပ်ရှင်ထောက်ပံ့သူအဖြစ်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် PET ခွက်များနှင့်ပေပုလင်းများကိုစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
အတွေ့အကြုံရှိသောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူအနေဖြင့် Copak သည်သင့်အားနားထောင်ပေးမည်၊ အရည်အသွေးသည်အမြစ်ဖြစ်သည်၊ ဖောက်သည်သည်သဘောတရားဖြစ်သည်။ Copak သည်အရည်အသွေးနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအမြဲတမ်းဘဝ၊ အရည်အသွေး၊
လူမှုရေးအရတာ ၀ န်ယူသည့် ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနှင့် Copak သည်အလုပ်အကိုင်ဖိအားကိုလျှော့ချရန်၊ ၀ န်ထမ်းများ၏အလားအလာကိုလှုံ့ဆော်ရန်နှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ပံ့ပိုးမှုများပေးရန်တာဝန်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အမှန်တကယ်လက်တွေ့ကျသောလုပ်ရပ်များဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စီးပွားရေး၊ ၀ န်ထမ်းများနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုသဟဇာတဖြစ်စေရန်စည်းလုံးမှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
ငါတို့ PET မြည်းစမ်းခွက် အစားအစာအရသာအတွက်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းကိုအရောင်းဆိုင်များ၊ စူပါမားကက်များ၊ ဘားများနှင့်အခြားနေရာများတွင်ဖောက်သည်များအရသာရှိတဲ့ဒိန်ချဉ်၊ ဖျော်ရည်၊ အဖျော်ယမကာ၊ ရေခဲမုန့်၊ ဖျော်ရည်၊ ကော်ဖီ၊ ၎င်း၏ထူးခြားသောကြည်လင်ပြတ်သားပြီးပေါ့ပါးပြီးအကြမ်းခံသောဒီဇိုင်းသည်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအဖျော်ယမကာများ၌ရေခဲများပြသနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကား classy tumblers ဆိုဒါ, ဘီယာ, စပျစ်ရည်, ရောနှောအချိုရည်, ရေနှင့်အခြားအဘို့ကြီးသော!
ယိုစိမ့်မှုနှင့်ယိုဖိတ်မှုများကိုကာကွယ်ရန်အလွန်အမင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောဒီဇိုင်းပုံစံသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ထိရောက်သောထုပ်ပိုးမှုဖြေရှင်းချက်ကိုပေးသည်။ နေရာခန်းများ၊ reception ည့်ခံနေရာများနှင့်အအေးသောက်သုံးရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။
လူကြိုက်အများဆုံးအချို့ PET မြည်းစမ်းခွက် အသေးစိတ်ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဤအရွယ်အစားများအပြင်အခြား volumes များ၊ အရွယ်အစားများနှင့်ပုံစံများလည်းရှိသည်။ သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုသာကျွန်ုပ်တို့ထံပို့ပေးပါ၊ သင်၏မေးခွန်းများကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးဖြေကြားပေးပါမည်။
PET မြည်းစမ်း CUP စီးရီး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝယ်ဖို့ဘယ်လို PET မြည်းစမ်း CUP?
စျေးနှုန်းကိုးကားခြင်း၊ PI လုပ်ခြင်း၊ အပ်ငွေပေးချေခြင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုစတင်ခြင်း၊ ပုံနှိပ်ခြင်း၊ တင်ပို့
ရှေ့သို့ PET Cup Lids
နောက်တစ်ခု: ပလတ်စတစ်ခွက် 12oz
Clear PET ဖလား